Salama Tsara Miriaria Miaraka Amin’ny Fianakaviany Ao Toronto, Kanada i Alexander Sodiqov, Mpikambana Ato Amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2014 3:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, বাংলা, русский, Français, English
Anisan'ny hetsika nataonay tamin'ny #FreeAlexSodiqov: Mpanoratra GV Nogadraina Ao Tajikistan
Faly mampilaza ny Global Voices fa nigadona soa aman-tsara tao Toronto i Alexander Sodiqov, mpanoratra ato amin'ny GV sy mpamoaka lahatsoratra teo aloha tao amin'ny Global Voices Azia Afovoany, ary vonona hanohy ny fiainany amin'ny maha-akademika azy ao amin'ny oniveriste ao Kanada. Tonga tao Toronto tamin'ny Alarobia i Alex. Notsenain'i Musharraf, vadiny sy i Erica, zanany vavy izy tamin'ny fahatongavany.
Hanohy ny fianarany doktorà ao amin'ny Oniversiten'i Toronto izy ary ho eo ambany fanaraha-mason'ny Dr Edward Schatz sy John Heathershaw, tompon'andraikitra tamin'ny fandrindrana ny hetsika freealexsodiqov.
Mivaky toy izao ny hafatra nozarain'i Schatz tao amin'ny Facebook:
Faly ny tenako sy i John Heathershaw fa tafaverina ao Toronto i Alexander Sodiqov, Musharraf Sodiqova sy ny zanany vavy Erica! Nisy ny fitakiana ofisialy nalefa tany amin'ireo manampahefana mba ahafahany miverina ao Toronto, ary nankatòavina izany. Raha ny tena izy dia tokony mbola atao fanadihadiana i Alexander, saingy mampiseho mazava ny fankatòavan'ny manampahefana Tajik hamela azy hoany ivelany fa resy lahatra ny amin'ny tokony hamotsorana azy ihany koa izy ireo. Maneho ny fisaoranay an'ireo olona marobe sy fikambanana izay niaro am-pahibemaso sy niasa manokana tamin'ny fiverenan'i Alexander amin'ny fianarany doktorà ao amin'ny Oniversiten'i Toronto izahay. Azonao an-tsaina fa fotoan-tsarotra ho azy rehetra ireny, misy ny milaza fa somary hanahirana kely azy ny hizotra indray amin'ny fiainana vaovao ao Toronto. Azafady, arahabao ny fiverenan'izy ireo saingy hajao ihany koa ny filan'izy ireo hanana fiainana manokana azafady.
Nosamborina tamin'ny 16 Jiona izy raha nanatontosa fikarohana akademika tao amin'ny tanàndehibe mikorontana ara-politika ao Khorog, Tajikistan, navotsotry ny GKNB (KGB teo aloha) tao am-ponja izy tamin'ny 22 Jolay. Na dia izany aza, nitombo ny ahiahy mikasika izay mety hanjò azy raha nisafidy hanalava ny fe-potoana hanaovana fanadihadiana azy ny manampahefana Tajik tamin'ny 19 Aogositra, nilaza ny bilaogera Tajik iray fa tokony hanao tolona mba hanafoanan'ny governemantan'i Tajik tanteraka ny fiampangana azy.
Nanamarika ny lahatsoratr'i Schatz fa mbola tsy nofafana tamin'ny fomba ofisialy ireo fiampangana azy, saingy toa midika fiainana hoan'i Alex, Musharraf sy Erica mba hiverina indray amin'ny fiainana mahazatra taorian'ny vanim-potoanan'ny tahotra sy ny tebiteby.
Ireto sary nandritra ny hetsika fiaretan-tory manerantany tamin'ny 16 Jolay notontosaina tamin'ny anaran'i Sodiqov:
7 andro izayArmenia